I-Airbnb ngeyawo wonke umuntu
Nansi indlela esakha ngayo i-Airbnb enezici zezidingo zabantu abengeziwe
Lokho okuwumgomo wethu
Sifuna ukwenza ukuvakasha kungabandlululi futhi kube nezidingo zawo wonke umuntu. Lo msebenzi awukapheli, kodwa nansi indlela esiwenza ngayo okwamanje.
Izivakashi ezinezidingo ezikhethekile ngokuvamile zithembele ezithombeni ukuze ziqiniseke ukuthi indlu izozilungela. Yingakho sifuna ababungazi banikeze izithombe zazo zonke izici zezidingo ezikhethekile abanazo, futhi yingakho izindlu zinengxenye ekhethekile ebekelwe ukubonisa lezi zithombe.
Izindinganiso zedijithali zezici zezidingo ezikhethekile
Sisebenzela emithethweni yezici zezidingo ezikhethekile eziyidijithali ezikhishwe Iziqondiso Zezici Zezidingo Ezikhethekile Zokuqukethwe Kuwebhu. Sitshala nezimali kumathuluzi okuthesta ngokuzenzakalelayo ukuze asisize sithole izinkinga ezengeziwe.
Izindlu ezengeziwe ezinezici zezidingo ezikhethekile
Sisebenza kanzima ukuze sithole izindlu ezinezici zezidingo ezikhethekile ku-Airbnb, futhi sikwenza kube lula ukuzithola ngokuthuthukisa izici zethu zokusesha, okuhlanganisa izihlungi ezisebenziseka kalula nezithombe ezingcono ekhasini lemiphumela yokusesha.
Okokuzithokozisa okunezici zezidingo ezikhethekile
Izinto ezenziwayo ezengeziwe ezinezici zezidingo ezikhethekile Okokuzithokozisa kwe-Airbnb—ezibungazwa ochwepheshe bendawo—zisendleleni.
Siyazi ukuthi ukuthola indawo yokuhlala noma okokuzithokozisa ozokubhukha okuhlangabezana nezidingo zakho kungaba nzima. Nanka amacebiso ambalwa okuqikelela ukuthi uhambo lwakho luhamba ngokushelelayo ngangokunokwenzeka.
Thola indawo ekahle
Sebenzisa izihlungi zokusesha ukuze ubonise kuphela izindawo noma okokuzithokozisa okunezici zezidingo zakho ezikhethekile. Uma usuzitholile izindlu ezimbalwa, bheka ingxenye ethi “Izici zezidingo ezikhethekile” yendlu ngayinye uthole izithombe nezincazelo zezici ozidingayo.
Khuluma nalabo abangaba ababungazi
Uma kukhona okukhethekile okukukhathazayo, qiniseka ukuthi uthumelela umbungazi umyalezo ngaphambi kokubhukha ukuze uqiniseke ukuthi angakwazi ukukunika indawo yokuhlala. Ungathumelela labo abangaba ababungazi umyalezo ngelinki ethi “Thinta umbungazi” ekhasini lendlu noma okokuzithokozisa kwabo.
Siza ezinye izivakashi
Yini obungathanda ukuyazi ngaphambi kokubhukha? Vumela izivakashi ezinezidingo ezikhethekile zazi lokho ezingakulindela ngokubhala ukuphawula okuningiliziwe.
Nazi izindlela ezimbalwa ongasiza ngazo izivakashi ezikhubazekile
Yenza indlu yakho ibe nezici zezidingo ezikhethekile ezengeziwe
Ungase ungaqapheli ukuthi indlu yakho kakade isinazo izici zezidingo ezikhethekile—njengeminyango evulekile—noma ukuthi ungazifaka ezinye zalezi zici ngaphandle komsebenzi omkhulu noma izindleko. Funda indlela ongasiza ngayo izivakashi ezinezidingo ezikhethekile.
Faka izithombe zezici zezidingo ezikhethekile
Faka izithombe zezici zakho zezidingo ezikhethekile ukuze ubonise indawo yakho ezivakashini ezingaphezu kuka-70,000 enezidingo ezikhethekile ezisesha ku-Airbnb nyanga zonke. Ukuze uqalise, iya Menenja Indawo Yakho endaweni yendlu ongathanda ukuyifaka izici zezidingo ezikhethekile. Qiniseka ukuthi ubhala incazelo esithombeni ngasinye futhi uhlole amacebiso ethu ezithombe.
Funda ngezilwane eziwusizo
Izilwane eziwusizo zisiza abantu abanezinhlobo ezihlukahlukene zokukhubazeka, futhi i-Airbnb inezinqubomgomo ezibavumelayo ezimweni eziningi. Funda indlela yokusiza izivakashi ezinezilwane eziwusizo.
Izici zezidingo ezikhethekile e-Airbnb
I-Airbnb inamaqembu agxile ekusizeni ekwakheni imikhiqizo engasetshenziswa yiwo wonke umuntu. Onjiniyela namadizayina kula maqembu asebenzela ukuthuthukisa amasistimu edizayini ye-Airbnb nokufundisa ozakwabo njengoba sifunda emphakathini wethu.
Siqhuba ucwaningo lwabantu abakhubazekile futhi sisebenza ngokuqhubekayo nochwepheshe emphakathini wezidingo ezikhethekile ukuze zisisize sakhe i-Airbnb ecabangela izidingo ezikhethekile. Funda kabanzi ngokubamba iqhaza ocwaningweni.
Ngizisebenzisa kanjani izihlungi zokusesha?
Sebenzisa izihlungi zokusesha ukuze ugxile kulokho okufunayo uma ubheka indawo yokuhlala. Ungasebenzisa lezi zihlungi ukuze uveze kuphela izindlu ezinezici ezithile zezidingo ezikhethekile. Funda kabanzi
Indlela engingasiza ngayo izivakashi ezikhubazekile?
Ikhaya lakho kungenzeka linezici zabantu abanezidingo ezikhethekile ngaphezu kwalokho okucabangayo. Qala ngokubuyekeza uhlu lwethu lwezici zezidingo ezikhethekile ongazifaka endlini yakho. Funda kabanzi
Ngingaba kanjani umbungazi?
Uma unekhaya noma indawo enezici zabantu abanezidingo ezikhethekile, singakujabulela ukuba ube umbungazi we-Airbnb. Funda ngokubungaza